တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်နေတိုင်း အထီးကျန်နေပြီလို့ ပြောလို့ရကြေးလား – MyStyle Myanmar
တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်နေတိုင်း အထီးကျန်နေပြီလို့ ပြောလို့ရကြေးလား
နှစ်ရှည်လများတွဲလာတဲ့ ချစ်သူနဲ့အခြေနေအမျိုးမျိုးကြောင့် လက်တွဲဖြုတ်လိုက်ရလို့ လမ်းပျောက်သွားသလိုခံစားနေရလား?။ ဒါမှမဟုတ် Single life မှာ သက်တမ်းရင့်သွားလို့ ပျော်ရွှင်စရာ Relationship တစ်ခုရပါ့အုန်းမလား? စသဖြင့်တွေးပူခံစားနေရရင်တော့ ဒီစာလေးကစာဖတ်သူအတွက်ပါပဲ။ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ တစ်ဦးတည်းရှင်သန်ရပ်တည်ခြင်းဟာ ဆက်စပ်လို့မရတဲ့ အရာနှစ်ခုမဟုတ်တာကို အရင်ဆုံးသတိရလိုက်ပါ။
ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အရာတွေကိုရှာဖွေရင်း ကြိုးစားဖြည့်ဆည်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့Relationship Status နဲ့ မသက်ဆိုင်ပဲပျော်ရွှင်မှုတွေကို အမြဲပိုင်ဆိုင်နေရမှာ အသေချာပါပဲ။ တစ်ခုရှိတာက ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှု အစစ်မှန်ကို ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲ၊ ကိုယ့်ရဲ့ Relationship အခြေနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုခံယူထားသင့်သလဲ ဆိုတာတွေကို နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာ သိထားမှသာ Independent ဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ် ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားနိုင်တာမို့ လက်ခံထားရမယ့်အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
သင်သာ Relationship ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုရင် သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေကို ဥပေက္ခာပြုထားပြီး မိမိဖြစ်ချင်တာတွေကို အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Singleတစ်ယောက်မှာတော့ ဒီလိုအနှောင်အဖွဲ့တွေကင်းလို့ သင့်ကိုဘယ်သူကမှ လွမ်းမိုးချယ်လှယ်မှုတွေမပြုနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေအားလုံးကို ကိုယ်သာပိုင်ပြီး ချုပ်နှောင်မှုကင်းကင်းနဲ့ ကိုယ့်အိပ်မက်တွေကိုယ်ရှာဖွေနိုင်မယ့် အနှစ်သာရကိုခံစားကြည့်ပါ။
(၂) ကိုယ့်ကိုယ်ကို Version မြှင့်ဖို့အချိန်တွေပါ
Source : struggling together
ဖုန်းတွေတောင်အချိန်နဲ့ တပြေးညီ version မြှင့်နေရတဲ့ချိန်မှာ သင့်ကိုသင်လည်း version မြှင့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ ကိုယ့်အချိန်တွေအားလုံးကို ကိုယ်သာပိုင်နေချိန်ဟာ အရာအားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရသလိုပါပဲ။သင်ဖြစ်ချင်တာမှန်သမျှ အကောင်ထည်ဖော်နိုင်အောင် ကြိုးစားလို့ရနိုင်မယ့်အချိန်တွေမို့ ပိုကောင်းပြီးပို smart ကျတဲ့ new version ဖန်တီးနိုင်စေမှာပါ။
Source : clasesinstituto
ကိုယ့်ရဲ့ career နဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ hobby တွေ ရှိထားဖို့မလိုဘူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အသစ်ဆန်းသော hobby တွေကို စမ်းသပ်ရှာဖွေရင်းပိုကောင်းတဲ့ career life တစ်ခုကို ရောက်သွားစေနိုင်တဲ့အထိ အကျိုးထူးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဝါသနာနောက်ကိုလိုက်ရတာဟာ အချိန်တွေကုန်ဆုံးမှန်းမသိနိုင်လောက်အောင် အနှစ်သာရရှိတာအသေချာပဲမို့ ခုပဲစတင်လိုက်ပါ။
(၄) စိတ်တူကိုယ်တူ မိတ်ဆွေတွေရှာဖွေဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါ
သင်သာRSရှိမယ်ဆိုရင် သင့်အချိန်ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းအတော်များများဟာ သင့်လက်တွဲဖော်အတွက်ပဲ ပေးထားရမှာပါ။အဲ့အတွက်သင်နဂိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိတ်ဆွေအသိုင်းဝိုင်းကနေတောင် အနည်းငယ်ဝေးလာသလို ခံစားလာရစေနိုင်တာမို့ မိတ်ဆွေအသစ်ရဖို့ဆိုတာ အင်မတန်အလှမ်းဝေးသွားပါပြီ။ သင်သာsingleဆိုရင် ဒီလိုဆုံးရှုံးမှုမျိုးကို Bye-Byeပါပဲ။ သင်ဝါသနာပါရာ သင်တန်းတွေတက်ရင်း စိတ်တူကိုယ်တူမိတ်ဆွေအသစ်တွေ ရနိုင်သလို၊ မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေကိုလဲ အချိန်ပိုပေးနိုင်လို့ သင့်အတွက် connection ကောင်းတွေရလာနိုင်ပါတယ်။
(၅) လကုန်ခါနီးလဲ ဝမ်းဝခါးလှမယ့်အချိန်ပါ
Source : Femmes
“Relationships are expensive”ဆိုသလိုပါပဲ။Relationship တစ်ခုမှာ သင့်လက်တွဲဖော်ကသာ ရေသာခိုအချောင်ခိုတတ်မယ်ဆိုရင် သွာယလာကုန်ကျစရိတ်တွေဟာ သင့်ခေါင်းပေါ်အလိုလိုရောက်လာမှာပါ။ဒါမဲ့သင်သာ single ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်မှာအပိုကုန်ကျစရိတ်တွေမရှိလို့ သင်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ သင့်စိတ်ကြိုက်သုံးစွဲနိုင်လို့ လကုန်ခါနီးလဲ ဝမ်းဝခါးလှနေနိုင်မှာအသေချာပါပဲ။
နှဈရှညျလမြားတှဲလာတဲ့ ခဈြသူနဲ့အခွနေအေမြိုးမြိုးကွောငျ့ လကျတှဲဖွုတျလိုကျရလို့ လမျးပြောကျသှားသလိုခံစားနရေလား?။ ဒါမှမဟုတျ Single life မှာ သကျတမျးရငျ့သှားလို့ ပြျောရှငျစရာ Relationship တဈခုရပါ့အုနျးမလား? စသဖွငျ့တှေးပူခံစားနရေရငျတော့ ဒီစာလေးကစာဖတျသူအတှကျပါပဲ။ ပြျောရှငျမှုနဲ့ တဈဦးတညျးရှငျသနျရပျတညျခွငျးဟာ ဆကျစပျလို့မရတဲ့ အရာနှဈခုမဟုတျတာကို အရငျဆုံးသတိရလိုကျပါ။ ကိုယျဝါသနာပါတဲ့အရာတှကေိုရှာဖှရေငျး ကွိုးစားဖွညျ့ဆညျးနမေယျဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ရဲ့Relationship Status နဲ့ မသကျဆိုငျပဲပြျောရှငျမှုတှကေို အမွဲပိုငျဆိုငျနရေမှာ အသခြောပါပဲ။ တဈခုရှိတာက ကိုယျ့ရဲ့ပြျောရှငျမှု အစဈမှနျကို ဘယျလိုရှာဖှရေမလဲ၊ ကိုယျ့ရဲ့ Relationship အခွနေနေဲ့ ပတျသကျပွီးဘယျလိုခံယူထားသငျ့သလဲ ဆိုတာတှကေို နညျးလမျးမှနျကနျစှာ သိထားမှသာ Independent ဖွဈတဲ့လူတဈယောကျအဖွဈ ပြျောရှငျမှုကိုခံစားနိုငျတာမို့ လကျခံထားရမယျ့အခကျြလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။
သငျသာ Relationship ရှိတဲ့ သူတဈယောကျဆိုရငျ သငျ့လကျတှဲဖျောရဲ့ လိုအငျဆန်ဒတှကေို ဥပက်ေခာပွုထားပွီး မိမိဖွဈခငျြတာတှကေို အကောငျထညျဖျောနိုငျဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ Singleတဈယောကျမှာတော့ ဒီလိုအနှောငျအဖှဲ့တှကေငျးလို့ သငျ့ကိုဘယျသူကမှ လှမျးမိုးခယျြလှယျမှုတှမေပွုနိုငျပါဘူး။ ကိုယျ့ရဲ့အခြိနျတှအေားလုံးကို ကိုယျသာပိုငျပွီး ခြုပျနှောငျမှုကငျးကငျးနဲ့ ကိုယျ့အိပျမကျတှကေိုယျရှာဖှနေိုငျမယျ့ အနှဈသာရကိုခံစားကွညျ့ပါ။
(၂) ကိုယျ့ကိုယျကို Version မွှငျ့ဖို့အခြိနျတှပေါ
ဖုနျးတှတေောငျအခြိနျနဲ့ တပွေးညီ version မွှငျ့နရေတဲ့ခြိနျမှာ သငျ့ကိုသငျလညျး version မွှငျ့ဖို့မမပေ့ါနဲ့နျော။ ကိုယျ့အခြိနျတှအေားလုံးကို ကိုယျသာပိုငျနခြေိနျဟာ အရာအားလုံးကို ပိုငျဆိုငျထားရသလိုပါပဲ။သငျဖွဈခငျြတာမှနျသမြှ အကောငျထညျဖျောနိုငျအောငျ ကွိုးစားလို့ရနိုငျမယျ့အခြိနျတှမေို့ ပိုကောငျးပွီးပို smart ကတြဲ့ new version ဖနျတီးနိုငျစမှောပါ။
ကိုယျ့ရဲ့ career နဲ့ မသကျဆိုငျတဲ့ hobby တှေ ရှိထားဖို့မလိုဘူးလို့ မထငျလိုကျပါနဲ့။ ကိုယျစိတျဝငျစားတဲ့ အသဈဆနျးသော hobby တှကေို စမျးသပျရှာဖှရေငျးပိုကောငျးတဲ့ career life တဈခုကို ရောကျသှားစနေိုငျတဲ့အထိ အကြိုးထူးနိုငျပါတယျ။ သငျ့ဝါသနာနောကျကိုလိုကျရတာဟာ အခြိနျတှကေုနျဆုံးမှနျးမသိနိုငျလောကျအောငျ အနှဈသာရရှိတာအသခြောပဲမို့ ခုပဲစတငျလိုကျပါ။
(၄) စိတျတူကိုယျတူ မိတျဆှတှေရှောဖှဖေို့အကောငျးဆုံးအခြိနျပါ
သငျသာRSရှိမယျဆိုရငျ သငျ့အခြိနျရဲ့ရာခိုငျနှုနျးအတျောမြားမြားဟာ သငျ့လကျတှဲဖျောအတှကျပဲ ပေးထားရမှာပါ။အဲ့အတှကျသငျနဂိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မိတျဆှအေသိုငျးဝိုငျးကနတေောငျ အနညျးငယျဝေးလာသလို ခံစားလာရစနေိုငျတာမို့ မိတျဆှအေသဈရဖို့ဆိုတာ အငျမတနျအလှမျးဝေးသှားပါပွီ။ သငျသာsingleဆိုရငျ ဒီလိုဆုံးရှုံးမှုမြိုးကို Bye-Byeပါပဲ။ သငျဝါသနာပါရာ သငျတနျးတှတေကျရငျး စိတျတူကိုယျတူမိတျဆှအေသဈတှေ ရနိုငျသလို၊ မိတျဟောငျးဆှဟေောငျးတှကေိုလဲ အခြိနျပိုပေးနိုငျလို့ သငျ့အတှကျ connection ကောငျးတှရေလာနိုငျပါတယျ။
(၅) လကုနျခါနီးလဲ ဝမျးဝခါးလှမယျ့အခြိနျပါ
“Relationships are expensive”ဆိုသလိုပါပဲ။Relationship တဈခုမှာ သငျ့လကျတှဲဖျောကသာ ရသောခိုအခြောငျခိုတတျမယျဆိုရငျ သှာယလာကုနျကစြရိတျတှဟော သငျ့ခေါငျးပျေါအလိုလိုရောကျလာမှာပါ။ဒါမဲ့သငျသာ single ဆိုရငျတော့ ကိုယျ့မှာအပိုကုနျကစြရိတျတှမေရှိလို့ သငျလိုအပျတဲ့နရောတှမှော သငျ့စိတျကွိုကျသုံးစှဲနိုငျလို့ လကုနျခါနီးလဲ ဝမျးဝခါးလှနနေိုငျမှာအသခြောပါပဲ။
MyStyle Myanmar2019-11-24T09:30:12+06:30November 19th, 2019|အထှထှေေ ဗဟုသုတ – General Knowledge|
တယောကျတညျးဖွဈနတေဲ့အခြိနျ နမေကောငျးတဲ့အခါ ကိုယျ့ကိုယျကိုဘယျလိုဂရုစိုကျမလဲ
သငျ့ကို မွနျမွနျဆနျဆနျ ရုပျရငျ့မွနျစအေောငျ ပွုလုပျနတေဲ့ တရားခံတခြို့